KEDU ỤDỊ FAỊLỤ HIBERFIL.SYS NA WINDOWS 10, 8 NA 7 NA OTU ESI EWEPU YA - WINDOWS - 2019
Kedu faịlụ hiberfil.sys na Windows 10, 8 na Windows 7 na otu esi ewepu ya
Ọ bụrụ na ị kụrụ isiokwu a site na ọchụchọ, ị nwere ike iche na ị nwere nnukwu hiberfil.sys faịlụ na ụgbọala C na kọmputa na Windows 10, 8 ma ọ bụ Windows 7, ma ị maghị ihe faịlụ ahụ dị ma ọ bụghị ehichapụ ya. A ga-atụle nke a, yana ụfọdụ nuances ndị ọzọ metụtara faịlụ a, ga-atụle n'isiokwu a.
Na ntuziaka anyị ga-enyocha ihe hiberfil.sys na ihe mere eji cho ya, otu esi wepu ma ọ bụ belata ya, iji wepụ ohere diski, ma ọ nwere ike ịkpali ya na disk ọzọ. Ntuziaka dị iche na isiokwu maka 10: Hibernation of Windows 10.
Kedu faịlụ hiberfil.sys?
Esi wepu hiberfil.sys na Windows (na ihe si na nke a)
Kedu otu esi belata ntinye ederede mkpuchi
Ọ ga-ekwe omume ịkwaga faịlụ hibernation hiberfil.sys na disk ọzọ
Gịnị bụ hiberfil.sys na kedu ihe mere ịchọrọ faịlụ nchekwa na Windows?
Ndekọ Hiberfil.sys bụ faịlụ ntinye ọkụ nke eji na Windows iji chekwaa data ma buru ya ngwa ngwa na RAM mgbe kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ agbanwuru.
Ndị nsụgharị ọhụrụ nke Windows 7, 8 na Windows 10 sistemụ arụmọrụ nwere nhọrọ abụọ maka ijikwa ike na ọnọdụ ụra - otu bụ ọnọdụ ụra nke kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ na-arụ ọrụ na ike dị ala (ma ka na-arụ ọrụ) ma ị nwere ike ịmalite ime ozugbo ọnọdụ ọ nọ n'ihu gị mere ka ọ hie ụra.
Ụdị nke abụọ bụ ịkwa ụra, nke Windows na-ede ihe niile dị na RAM ahụ na diski ike ma kwusi kọmputa. Oge ọzọ ị ga - agbanye, usoro ahụ adịghị ebu ọkpụkpụ, ma ọdịnaya nke faịlụ ahụ na-ebugo. N'ihi ya, ọnụ ọgụgụ nke RAM na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ, ka ohere hiberfil.sys na-ewe na diski.
Ọnọdụ hibernation na-eji faịlụ hiberfil.sys iji chekwaa ebe nchekwa nke kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ, ebe ọ bụ faịlụ faịlụ, ị nweghị ike ihichapụ ya na Windows site na iji ụzọ ndị eji eme ihe, ọ bụ ezie na ike ịme ka ka dị, gbakwunyere na nke ahụ.
File hiberfil.sys na diski ike
Ị nwere ike ị gaghị ahụ faịlụ a na disk. Ihe kpatara ya bụ ma ọ bụ mkpuchi mkpuchi agbanyụrịrị, mana, o yikarịrị, n'ihi na ị meghị ka ngosi nke zoro ezo ma chekwaa faịlụ Windows. Lezienụ anya: ndị a bụ nhọrọ abụọ dị iche iche na nhazi nke ụdị onye nduzi, ya bụ. ichighari ngosipụta nke faịlụ ezoro ezo ezughị, ị ghaghị ịchọta ihe "zoro ezo faịlụ faịlụ".
Esi wepu hiberfil.sys na Windows 10, 8 na Windows 7 site na ịkwụsị ikpo ọkụ
Ọ bụrụ na ị naghị eji hibernation na Windows, ị nwere ike ihichapụ faịlụ hiberfil.sys site na ịkwụsị ya, si otú a na-ahapụ ohere n'elu diski ike.
Ụzọ kachasị ngwa iji gbanyụọ hibernation na Windows gụnyere usoro dị mfe:
Gbaa ọsọ ọsọ ọsọsọ dị ka onye nchịkwa (otu esi agba ọsọ ọsọ ọsọ dịka onye nchịkwa).
ma pịa Tinye
Ị gaghị ahụ ozi ọ bụla banyere ihe ịga nke ọma nke ọrụ ahụ, mana ịme mkpuchi ga-enwe nkwarụ.
Mgbe i mechara iwu ahụ, a ga-ehichapụ faịlụ hiberfil.sys site na C mbanye (ọ dịghị nyochaa na-achọrọkarị), ihe egwu egwu ga-apụ site na Malite menu (Windows 7) ma ọ bụ Shut Down (Windows 8 na Windows 10).
Mgbakwunye ndị ọzọ nke ndị ọrụ nke Windows 10 na 8.1 ga-eburu n'uche ya: ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị naghị eji hibernation, faịlụ hiberfil.sys na-esonye na atụmatụ "mmalite mmalite," nke nwere ike ịchọta n'ụzọ zuru ezu na edemede Quick Start of Windows 10. Na-abụkarị ọdịiche dị ịrịba ama na nbudata ọsọ ọsọ agaghị, ma ọ bụrụ na ị kpebie ịmeghachikwa mkpuchi, jiri usoro a kọwara n'elu na iwu ahụikecfg -h na.
Esi gbanyụọ njedebe site na nchịkwa nchịkwa na ndekọ
Usoro a dị n'elu, ọ bụ ezie na ọ bụ, n'echiche nke m, ọ bụghị naanị otu. Nhọrọ ọzọ bụ iji gbanyụọ mkpuchi ma wepụ faịlụ hiberfil.sys na ogwe ntụziaka.
Gaa na Ogwe Njikwa Windows 10, 8 ma ọ bụ Windows 7 wee họrọ "Ike". Na windo ekpe nke na-egosi, họrọ "Ịtọ mgbanwe na ọnọdụ ehi ụra", mgbe ahụ - "Gbanwee nhazi ike dị elu." Mepee "ụra", wee - - "Ịme mkpuchi mgbe." Debe "Mgbe" ma ọ bụ 0 (zero) nkeji. Tinye mgbanwe gị.
Na ụzọ ikpeazụ iji wepụ hiberfil.sys. Nke a nwere ike ime site na Windows ndekọ editọ. Amaghị m ihe kpatara nke a ji dị mkpa, ma e nwere ụzọ dị otú ahụ.
Gaa na ndekọ ụlọ ọrụ HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control Power
Ụkpụrụ nhazi HiberFileSizePercent ma HibernateEnabled edozi na zero, wee mechie edetu ndekọ ma malitegharịa kọmputa ahụ.
Ya mere, ma ọ bụrụ na ị naghị eji hibernation na Windows, ị nwere ike iwepu ya ma nwee ohere ụfọdụ na diski ike gị. Ikekwe, nyere nnukwu mpịakọta nke taa, nke a adịghị mkpa, ma ọ nwere ike ịbịaru aka.
Windows abụghị naanị na-enye gị ohere ihichapụ faịlụ hiberfil.sys, kamakwa belata nha faịlụ a ka ọ ghara ịchekwa data niile, mana ọ bụ naanị maka ịme mkpu na ngwa ngwa. Ka RAM dị na kọmpụta gị, otú ahụ ka ọnụ ọgụgụ nke ohere ohere dị na sistemụ ahụ ga-adị.
Iji belata ọnụ ọgụgụ faịlụ mkpuchi ahụ, na-agba ọsọ ọsọ ọsọ dịka onye nchịkwa, tinye iwu ahụ
ikecfg -h -type belata
ma pịa Tinye. Ozugbo i mechara iwu ahụ, ị ​​ga-ahụ ọkwa ntinye mkpuchi ọhụrụ na octets.
Ọ ga-ekwe omume ịfefe faịlụ hibernation hiberfil.sys na disk ọzọ
Ee e, hiberfil.sys enweghị ike ibufe ya. Ihe odide mkpuchi bụ otu n'ime faịlụ ndị ahụ a na-apụghị ịfefe na disk ọzọ karịa nkewa usoro. E nwere ọbụna ihe na-akpali mmasị sitere n'aka Microsoft banyere ya (na Bekee) nke isiokwu ya bụ "Paradox System File". Ihe kachasị mkpa nke nchịkwa ahụ, na njikọ ndị a na-atụle na faịlụ ndị ọzọ a na-adịghị akwalite, bụ ihe ndị a: mgbe ị na-agbanye kọmputa (gụnyere site na ọnọdụ mkpuchi), ị ghaghị ịgụ faịlụ site na diski ahụ. Nke a chọrọ ọkwọ ụgbọala faịlụ. Mana ọkwọ ụgbọala faịlụ dị na diski nke a ga - agụ.
Iji gbanye ọnọdụ ahụ, a na-eji obere ọkwọ ụgbọala pụrụ iche nke nwere ike ịchọta faịlụ usoro dị mkpa maka ịdebe na mgbọrọgwụ nke diski usoro (ma na ebe a) ma buru ha na ebe nchekwa ma ọ bụ naanị mgbe a dụnyere ọkwọ ụgbọala faịlụ zuru ezu nke nwere ike ịrụ ọrụ na ya. ngalaba ọzọ. N'ihe banyere mkpuchi ọkụ, a na-eji otu obere faịlụ ahụ rụọ ọrụ maka ibudata ọdịnaya nke hiberfil.sys, nke si na nke ọkwọ ụgbọala faịlụ ahụ.